Ropotamo salad Uche ọgụgụ isi - echiche maka ụlọ na ubi
Akwụkwọ mmado Akwụkwọ mmado
Window nwere enyo
Ebe a na-esi nri
Foto nke kichin na-acha ọbara ọbara
Foto nke kichin na agba siri ike
Foto nke kichin d-udi akuku
Foto nke kichin nwere fuchsia
Foto nke kichin ụdị ejiji
Foto ndị dị na kichin na odo odo
Ihe osise nke ime ụlọ ya na kichin na ime ụlọ nri - echiche ụlọ
Ihe osise nke ime ụlọ ya na agba aja aja na agba aja aja
Foto ndị dị n'ime ụlọ ahụ dị ọcha
Foto ndị dị n'ime ụlọ ahụ dị ọcha, na-acha aja aja na agba aja aja
Foto mgbidi TV - echiche dị n’azụ mgbidi n’azụ TV
Ihe osise na echiche maka ịchekwaa ime
Foto ndị dị n'ime ụlọ ebe a na-acha odo odo
Corridor na paseeji
Foto na echiche maka corridor na paseeji
Foto na echiche maka ụlọ nwere nnukwu ụlọ
Eserese nke ụlọ ọgbara ọhụrụ nwere ọdọ mmiri
Ndokwa na ịkọ ubi
Ihe ịchọ mma n’ubi
Flowerslọ okooko osisi
Họrọ mpi foto nke mpako m
Ivan Dimitrov ………. Họrọ foto ndị sonyere na My
Anya Gyoreva ………. Họrọ foto ndị sonyere na My
Steli Nikolova ………. Họrọ foto ndị sonyere na My
Stefka Anestieva ………. Họrọ foto ndị sonyere na My
Boryana Georgieva ………. Họrọ foto ndị sonyere na My
Steisi An ………. Họrọ foto ndị sonyere na My
Kalinka Stoilova ………. Họrọ foto ndị sonyere na My
Desi Ivanova ………. Họrọ foto ndị sonyere na My
Asia Doikova ………. Họrọ foto ndị sonyere na My
Ihe ndozi tebụl
Ihe ịchọ mma na mgbidi
Candlesticks na lan lamps
Ihe ndozi nke udu mmiri
Chọ mma n'oge mgbụsị akwụkwọ
Ihe ịchọ mma agbamakwụkwọ
Ime ụlọ ụmụaka
Nchiri na ákwà mgbochi
Na agba n'ime ime
Kpụrụ ndị dị n'ime ime
Nhazi na cochọ Mma
Ngwa ngwa, dị mfe, na-atọ ụtọ!
Spaghetti / onyinye
Ntụziaka maka ekeresimesi
Mee ya onwe gi
18.09.2014 Bipụtara: Senti Art
Oge oyi, Echiche Homelọ, Ntụziaka
Ntụziaka maka oge oyi kachasị amasị onye ọ bụla - salad Ropotamo.
Ngwaahịa achọrọ maka otu ọgwụ (ihe dị ka nnukwu ite 8).
Ejiri agwa 1
Nnukwu nnukwu mkpọ nke 1
Mkpo anụ ọkụkọ 1 nnukwu mkpọ
1 nnukwu ite puree tomato mkpọ
1 n'arọ carrots
Nnukwu peas 1 nke mkpọ mkpọ (nhọrọ)
Njikọ pasili 1-2 Inazọ marina
Mmanụ - 180 c
Mmanya - 180 c
Sugar - 50 c
Mara: Na nke a, ndị a bụ akwụkwọ nri eji eme ụlọ na poteto a masịrị ha nke akwadoro dịka masịrị gị. Ọ bụrụ n’ikpebie iji ite a zụtara, anyị anaghị ekwe gị nkwa maka uto na ogo nsonaazụ ya.
Anyị na-ata agwa na karọt iche iche. Bee karama n'ime cubes, ose a roara n'ọkụ na pickles, pasili.
Kpochaa mmanụ, mmanya, nnu na shuga ka ọsụsụ wee kpuchie stovu ahụ ruo mgbe nnu na shuga gbazee. Wepu si na stovu ka ajụkwa.
Anyị na-akwadebe akpa nke kwesịrị ya ma jikọta karọt esiri ya, kukumba e ghere eghe na ose, pasili ma wụsa agwa ahụ esiri ya. N’ikpeazụ, anyị na-etinye ite nke mado tomato. Ebido ma wụsa na marinade jụrụ. Ọzọ, anyị na-akpali nwayọ. Hapụ ya ka ọ guzo ọtọ n’abali na mmiri ịgwakọta ụtọ nke ihe ndị ahụ. N'echi ya, n'ụtụtụ, anyị na-ejupụta ite ma mee ya mee nri. Nke a bụ!
ụlọ oge oyi, ulo ntamu, nri mkpọ, ini etuep, nri mkpọ, oge mgbụsị akwụkwọ oyi, Ntụziaka na agwa, Ezi ntụziaka, Ezi ntụziaka n'oge oyi, mu ntamu, letus, Ropotamo salad, echiche maka ulo, ime ime, arịa ụlọ, n'ime ime, imewe echiche, ụlọ ọgbara ọhụrụ, icho mma, nka nka
Ijere poteto a beautifulara n'ọkụ dị na ụdị nke rose. Bee ma ọ bụ sie ya nduku ...
Hedgehogs dị ụtọ
Echiche mara mma maka ịme ụlọ na-atọ ụtọ n'ụlọ n'ụdị hedgehogs. Enwere ike ime ya ...
Egwuregwu piany piany dị ịtụnanya
Uzbeks na Tajiks nwere nri ndị yiri ya ma mba abụọ jikọtara nnukwu mkpa na mkpo…
Ọkpụ tortilla nwere anụ na chiiz
Enwere ike ịme ihe eji esi nri site na otutu flours, ihe obula ...
Anyị ga-ewetara gị usoro nri maka kapama n'ụzọ anyị kacha amasị…
Mpempe Akwụkwọ Achịmụrụ Arụrụ n'ụlọ
Anyị na-ewetara anyị echiche maka nkwadebe eji mepụta mmiri ara ehi eji eme ụlọ, nke uto anaghị…
German Hefekranz ma ọ bụ Hefezopf
Hefekranz ma ọ bụ Hefezopf (Akwụkwọ Ozi. Maya Wreath ma ọ bụ Maya Tile) bụ ọnwụnwa na-anwa ịgbasa ...
Anụmanụ na-acha uhie uhie nke anụ ezi n'ime anụ ezi
Echiche ntụrụndụ na nke ịkwadebe yabasị na anụ ezi anụ ezi. Ihe izizi a kwesiri ...
Elitis na Nwanyị Jane
Walle ala na ụlọ
Nwanyị nwanyị Jane
Art Studio - iko mara mma
Afụ Studio - Ngwa ndị ọzọ dị mma
Chọọ ebe a na-edebe ihe ochie
Chọọ ebe a na-edebe ihe ochie - Họrọ ọnwa - Julaị 2020 June 2020 Mee 2020 Eprel 2020 Machị 2020 Febụwarị 2020 Jenụwarị 2020 Disemba 2019 Nọmba Nọvemba 2019 Ọktoba 2019 Septemba 2019 August 2019 Julaị 2019 June 2019 Mee 2019 Eprel 2019 Machị 2019 Febụwarị 2019 Jenụwarị 2019 Disemba 2018 Ọktoba 2018 Septemba 2018 August 2018 Julaị 2018 June 2018 Mee 2018 Eprel 2018 Machị 2018 Febụwarị 2018 Jenụwarị 2018 Disemba 2017 Nọmba Nọvemba 2017 Ọktoba 2017 Septemba 2017 August 2017 Julaị 2017 June 2017 Mee 2017 Eprel 2017 Machị 2017 Nọmba Nọvemba 2016 Julaị 2016 June 2016 Mee 2016 Eprel 2016 Machị 2016 Jenụwarị 2016 Disemba 2015 Nọmba Nọvemba 2015 Ọktoba 2015 Septemba 2015 August 2015 Julaị 2015 June 2015 Mee 2015 Eprel 2015 Machị 2015 Febụwarị 2015 Jenụwarị 2015 Disemba 2014 Nọmba Nọvemba 2014 Ọktoba 2014 Septemba 2014 August 2014 Julaị 2014 June 2014 Mee 2014 Eprel 2014 Machị 2014 Febụwarị 2014 Jenụwarị 2014 Disemba 2013 Nọmba Nọvemba 2013 Ọktoba 2013 Septemba 2013 August 2013 June 2013 Mee 2013 Eprel 2013 Machị 2013 Febụwarị 2013 Jenụwarị 2013 Disemba 2012 Nọmba Nọvemba 2012 Ọktoba 2012 Septemba 2012 August 2012 Julaị 2012 June 2012 Mee 2012 Eprel 2012 Machị 2012
Art Senses bụ akwụkwọ eji egwupụta ime ụlọ nke ga - ewepụta echiche ọhụụ ime ụlọ ọhụrụ na nke ọhụụ. Echiche ndị na-adọrọ mmasị maka ụlọ.
Anyị ga-enyere gị aka na ndụmọdụ nka na aro ndị bara uru.
Nwee anụrị ma kwe ka mmụọ nke ike ihe kpuchie gị!
Nwee ụdị pụrụ iche na ịdị mma pụrụ iche, coziness na ọkụ pụrụ iche, nkwekọ n'etiti agba na ụdị. Ulo obula nwere ike ibu ebe di uto na nma.
Satto Art Gallery bu ihe ngosi intaneti - iko mara mma и ihe osise mmanụ.
Banyere Satto Art Gallery »
Art Studio Satto - iko edemede etere. Otu iko na-ese.
Ọ bụrụ na omume ọkachamara bụ nkà ihe ọmụma nke ụlọ ọrụ ahụ, mgbe ahụ, ihe ọhụrụ na ọhụụ bụ isi okwu na-abịaru nso maka ọrụ ọhụrụ. Ibu ụzọ maka Satto Art Studio bụ ichebe ihe ụtọ dị iche iche nke imepụta onyonyo pụrụ iche na ọrụ nka dị iche iche.
Banyere Satto Art Studio »
Windo nwere ugegbe kpuchie n’ime ya.
Ngwọta ime ime ụlọ.
Iberibe iko bụ ụdị nke etere agba n’usoro nke iko na-ese na ọ bụ ọrụ pụrụ iche nke ndị dere ya. A na-eji aka aka ya, na-eji iko ọ bụla dochie anya otu mkpụrụ. A na-ekpebi ngo a dika ihe mmadu choro ma dikwa n’ime ya.
Ime imewe »
© 2012-2020 Uche ọgụgụ isi - echiche maka ụlọ na ubi
Iwu Nzuzo Usoro ojiji Ndi ana-akpo na mgbasa ozi